Farmaajo oo sheegay in uu wareejiyay xilka ayaa shirar ku saabsan doorashada kawada Villa Soomaaliya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Farmaajo oo sheegay in uu wareejiyay xilka ayaa shirar ku saabsan doorashada...
Farmaajo oo sheegay in uu wareejiyay xilka ayaa shirar ku saabsan doorashada kawada Villa Soomaaliya
Farmaajo oo horay u sheegay in mas’uuliyada arimaha doorashooyinka uu ku wareejiyay Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa waxa uu shirar aan kala joogsi lahayn kawadaa Xarunta Villa Soomaaliya.
Waxa caawa ku qabtay Villa Soomaaliya. Shirka ayaa looga hadlayay sidii culumada Al Sunna door ugu yeelayn lahayd taabagalinta arimaha doorashooyinka.
Farmaajo oo shirka furay ayaa waxaa ka muuqatay dareen uu doonayay in uu ku muujiyo in uu wali gacanta ku hayo arimaha masiiriga Sida doorashooyonka iyo Amniga.
Sidoo kale Wax uu habeenkii xalay ahaa uu kulan kula yeeshay Villa Saomaaliya Shaqaalaha warbaahinta gaarka loo leeyahay, isaga oo kala hadlay arimo badan oo ay ku jiraan taabagalinta doorashooyinka.
Hadii wali Farmaajo ka hadlayo arimaha doorashooyjnka muxuu wareejiyay? Miyaysan u muuqan in RW Rooble uu ruwaayad been ah u Juliyo shacabka, gaar ahaan Musharaxiinta? Iyo in Farmaajo wali gacanta ku hayo awoodaha dalka oo dhan.